1080p Yakazara HD Projectors
Kuongorora kwezvinhu zvishanu zvikuru zvinokanganisa purojekita
na admin on 20-07-20
Akafungidzirwa screen saizi Kukura kwepurojekiti ndiyo inosarudza kana isu tichisarudza nzira dzekuratidzira dzakadai sepashure rekunongedza uye kumberi kwekuteedzera. Iyo inoisawo mberi zvinodiwa pane purojekita: kupenya kweprojekita kunodiwa kuti uite zvinodiwa nemhando yemifananidzo. Chete kana t ...
5G nyika iri Kuuya! NABSHOW 2019
na admin on 20-07-13
5G nyika iri Kuuya! NABSHOW 2019 2019, gore rino riri gore rakagadzika-gore uye rinoita se 5G network. Iyo 5G network ichaita sei kutaurirana, senge, terevhizheni (TV), nhare, redhiyo, vhidhiyo uye zvichingodaro? Iyo yatove nezvimwe zvakawanda zvido ...
MaSMEs anosarudza sei ekushambadzira 3D majekita
MaSMEs anosarudza sei ekushambadzira 3D majekiti Kutsanangura ppt pamusangano, kana kuratidza zvigadzirwa zvako kune vatengi, kana kudzidzisa vashandi nebasa, nezvimwe, vese vanofanirwa kushandisa projekita. Naizvozvo, mune bhizinesi basa remabhizinesi, kunyanya mune zvebhizinesi zviratidziro, purojekita yave ...
Kero:China, East Asia